मोदीलाई अत्याउंदै बिहारका एक कम्युनिष्ट उम्मेदवार 'कन्हैया कुमार'
नेपालमा वामपन्थी शक्तिको बोलबाला रहेका बेला भारतमा वामविचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल कमजोर बन्दै गएका छन् । चुनावी परिणामलाई आधार मान्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जनाधार खस्कँदो छ । मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र कांग्रेस आईबीच नै हुने पक्का पक्कि छ । भारतमा बिहीबारदेखि हुन गइरहेको लोकसभा चुनावमा वामविचारधाराका एक उम्मेदवार निकै चर्चामा छन्, उनि हुन् बिहारका कम्युनिष्ट उम्मदेवार– कन्हैया कुमार ।
नरेन्द्र मोदीको पार्टीलाई चुनौती दिन अहिले बिहारमा प्रखर युवा कन्हैया कुमार खडा भएका छन् । तर, ती युवाले बेग्लै पार्टी खोलेर नभई कम्युनिष्ट पार्टीको उम्मेदवारका रुपमा बीजेपीलाई वैचारिक चुनौती दिँदैछन् ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीआई) बाट बिहारको बगुसरायमा खडा भएका यी युवाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान खिचेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध नारा लगाउँदा उनलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा जेल हालिएको थियो ।
कन्हैया कुमार यतिबेला भाजपा सरकारको साम्प्रदायिक राजनीतिबाट पीडित अल्पसंख्यक भारतीयहरुका लागि एक विद्रोही आवाज बनेका छन् ।
कन्हैया कुमारको पृष्ठभूमि
कन्हैया कुमारको पृष्ठभूमि निकै दयनीय छ । खपडाले छाएको जीर्ण अवस्थाको उनको घरभित्र अहिले पनि दाउरामा खाना पाक्छ । मान्द्रोले बेरिएको भान्सा छ, जहाँ केही टेबुलहरु राखिएका छन् । घरमा एउटा असाध्यै थोत्रो साइकल छ ।
घरको अवस्था हेर्दा नै कन्हैयाप्रति जो कसैको श्रद्धा जागृत हुन्छ । पीएचडीसम्मको अध्ययन सिध्याएका उनले चाहेमा गतिलो जागिर खाएर मज्जाको लाइफस्टाइल बिचाउन सक्थे । तर, उनी व्यक्तिगत सुख सयलको तृष्णालाई बिर्सेर एउटा निष्ठा र समर्पणको राजनीतिमा होमिएका छन् ।
को हुन् कन्हैयाकुमार ?
भएको थियो जेएनयूमा ?
जेएनयूमा पढ्दै गर्दा सन् २०१६ को फेबु्रअरीमा कन्हैयार्लाइ प्रहरीले केही साथीहरुसहित पक्राउ गर्‍यो । उनीहरुविरुद्ध क्याम्पसभित्र अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
भारतीय संसदमा भएको आक्रमणका आरोपी अफजल गुरुलाई फाँसी दिने निर्णयको विरोध गर्दै कन्हैयाको नेतृत्वमा क्याम्पसमा प्रदर्शन गरिएको र काश्मिरलाई समेत जोडेर राष्ट्रविरोधी नारा लगाइएको भन्दै भाजपाका एक नेताले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । क्याम्पस प्रशासनले समेत उनलाई १० हजार भारु जरिवाना गराएको थियो । तर, कन्हैयाले राष्ट्रविरोधि नारा लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । पछि अदालतले क्याम्पसको निर्णयलाई अवैध र अविवेकी ठहर गरेको थियो ।
कन्हैया कुमारको गिरफ्तारी
कन्हैया कुमारको गिरफ्तारीको विपक्षी पार्टी, विद्यार्थी तथा बुद्धिजिवीहरुले कडा विरोध गरे । जेएनयूका विद्यार्थीहरुले लामो समय हड्ताल गरे । पटियाला हाउस कोर्टमा कन्हैयालाई उपस्थित गराइँदा त्यहाँ पुगेका जेएनयूका प्रोफेसर विद्यार्थीका साथै पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमणमा भाजपाका सांसद समेत संलग्न थिए ।
सन् २०१६ को मार्च २ मा दिल्ली उच्च अदालतले कन्हैयालाई ६ महिनाका लागि १० हजार भारुको अन्तरिम धरौटी दियो । न्यायाधिस प्रतिभा रानीले कन्हैयाले राष्ट्रविरोधि नारावाजी गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताइन् ।
कन्हैयाको त्यो भाषण
रिहा भएको भोलीपल्ट कन्हैयाले जेएनयू क्याम्पसको भरिभराउ अडिटरियममा भाषण दिए । जसमा उनले भारतबाट स्वतन्त्रता खोजेको नभएर भारतभित्र स्वतन्त्रता खोजेको बताएका थिए । भाजपा समर्थित राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघले भारतलाई सम्प्रदायका आधारमा विभाजन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाएका थिए । उनले आजादी ­(स्वतन्त्रता) को नारा लगाएर भाजपाइतर सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई आफूतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन सफल भए ।
अदालतबाट धरौटीमा छुटपछि कन्हैयालाई ज्यान मार्ने धम्कीहरु आउन थाले । भाजपाको युवा संगठनका एक नेताले त उनको जिभ्रो काट्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा नै गरे । साथै उनलाई गोली हान्नेलाई ११ लाख दिने भनेर नयाँ दिल्लीमा पोस्टरहरु टाँसिएका थिए ।
८ मार्च २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै कन्हैयाले काश्मिरी महिलाको बलत्कारमा भारतीय सेना संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए ।
कन्हैयाको जित कति सम्भव ?
इन्डोनेसियामा ७.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, धक्का अस्ट्रेलियासम्म
ट्रम्पले किमलाई पठाए पत्र, उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम परित्याग होला त ?
इथियोपियाका सेना प्रमुखको आफ्नै बडीगार्डद्वारा गोली हानी हत्या
इरानमाथि अमेरिका थप हाबी, कडा नाकाबन्दी लगाउने दाबी, के इरानलाई बर्बाद पार्न चाहन्छन ट्रम्प ?
अमेरिकालाई सूचना दिएको भन्दै इरानद्वारा ‘रक्षा मन्त्रालयका ठेकदार’लाई मृत्युदण्ड
ट्रम्पमाथि लाग्यो यौन दुव्र्यवहारको आरोप, पुस्तक बिकाउन 'पब्लिसिटी स्टन्ट' कि वास्तविकता ?
इरानमाथि अमेरिकाले आक्रमणको योजना बनाएको सन्सनीपुर्ण खुलासा
इरानमाथि प्रतिकारका लागि अमेरिकी सेना तयार, लोड गरिएका छन् बन्दुक : ट्रम्प
विश्वको शक्तिशाली नेता बने मोदी, पुटिन दोस्रो र ट्रम्प तेस्रो नम्बरमा
जुन ३० तारिखसम्म १ डलरमै हवाई यात्राको अवसर
ड्रोन खसालेको प्रतिक्रिया स्वरुप ट्रम्पले इरानमाथि सैनिक कारवाहीको आदेश दिए, तर फेरि पछि हटे
होर्मोज्गानमा जासुसी अमेरिकी ड्रोन खसालेको इरानको दाबी
सन् २०१८ सम्ममा ७ करोड मानिस विस्थापित, यस्तो छ राष्ट्रसंघको तथ्यांक
डोनाल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमा नै थाले सन् २०२० को चुनावी अभियान
मेक्सिको प्रेसका लागि विश्वकै खतरनाक देश, 'राष्ट्रपति ओब्राडोरका कारण थप चुनौती'
नाइजेरियामा आत्मघाती हमला, फुटबल हेरिरहेका ३० दर्शकको मृत्यु